Home News Dowlada Ireland oo 3 milyan oo Yuuro ugu Deeqday Soomaalida Dhibaatoyinka Ku...
Dowlada Ireland oo 3 milyan oo Yuuro ugu Deeqday Soomaalida Dhibaatoyinka Ku Heystan Dalka
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Simon Coveney iyo Wasiirka Horumarinta Ireland Ciarán Cannon ayaa ku dhawaaqay deeq lacageed oo dhan 3 milyan oo Yuuro oo ku saabsan dhibaatooyinka bini’aadanimo ee ka taagan Soomaaliya.
Sanadkii 2017, Ireland waxay bixisay lacag gaaraysa € 6.7 milyan si ay u taageeraan dadaalka lagu yareynayo dhibaatooyinka bini’aadannimo ee Soomaaliya. Caawinaadaasi waxaa bixiyay hay’adaha gargaarka bani’aadamnimada ee Ireland.
Waxaa lagu qiyaasey in 5.4 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar bani’aadamnimo.
In ka badan 2 milyan oo Soomaali ah ayaa gudaha ku barakacay, waxaana ay u baahan yihiin in la caawiyo sidda ay sheegtay dowladda Ireland.
Waxaa ay sidoo kale dowladda Ireland ay sheegtay Bishii la soo dhaafay, daadadkii ay sii xumeeyeen xaalad bani’aadamnimo ee ka taagan Gudaha Soomaaliya,waxaana ku barakacay in ka badan 220,000 oo Qof.